Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo Dib Oogu Noqotay Qarnigii 17aad (Zemene Masafint-gii)
Ethiopia oo Dib Oogu Noqotay Qarnigii 17aad (Zemene Masafint-gii)
Posted by ONA Admin	/ November 24, 2012
Markay dunidu maqasho magaca Ethiopia waxaa lasoo xasuustaa ama ay lamacno (synonym) tahay, gaajo, abaaro, saboolnimo, cuduro & meel hadd & jeer eey dagaalo ka ooganyihiin.
Haddaba qormadan waxaan ku eegi doonaa isbadelka kataagan Ethiopia ama ha ahaato dhinaca dhaqanka, dhaqaalaha & loolanka siyaasadeed ee ka dhex aloosan kooxda EPRDF kadib geeridii Kaligii Taliye Meles Zenawi.
Xukuumadaha kaligood taliyeyaasha ah shaqsigu doorka uu kaciyaro oo kaliya lama eego ee waxaa adkaanaysa in la kala saaro ururkii ama nidaamkii dawliga ahaa iyo shaqsigii kaligii taliyaha ahaa ileen isaga ayaa wax walba go’aamiyee. Marka uu shaqsiigaasu geeriyoodo ama uu booska ka baxana waxaan isla markiiba arkaynaa ururkii ama nidaamkii oo meesha ka siibaxaya, taas ayaa maanta Ethiopia ka taagan.
Maqaalkan wuxuu qoraaga mudane Xassan Macallin oo ah madaxa xafiiska Xidhiidhka Shucuubta Itobiya ee HAD kaga xogwaramayaa xaaladda uu ku sagan yahay dalka Itobiya iyo xidhiidhka ka dhexeeya qawmiyadda sida dhabta ah uu xukunta Itobiya iyo isbahaysigii EPRDF ee magac ahaan kula wadaagay xukunka.
Maqaalkaa oo dhamaystiran Halkan RIIX.